Breaking News… दुखद खबर ! नेपालमा पहिलोपटक को’रोनाका कारण ‘बरिष्ठ कन्सल्टेन्ट’ डा’क्टरको मृ’त्यु ! फेरी ह्वात्तै बढ्यो मृ’त्यु हुनेको संख्या ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/Breaking News… दुखद खबर ! नेपालमा पहिलोपटक को’रोनाका कारण ‘बरिष्ठ कन्सल्टेन्ट’ डा’क्टरको मृ’त्यु ! फेरी ह्वात्तै बढ्यो मृ’त्यु हुनेको संख्या !
काठमाडौँ । नेपालमा फेरी बढ्यो को’रोना सं’क्रमणबाट मृ’त्यु हुनेको संख्या बढेकाे छ । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ११ जना को’रोना सं’क्रमितको मृ’त्यु भएको छ । मृ’त्यु हुने १ महिला र १० पुरुष रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यससंगै नेपालमा को’रोनाबाट मृ’त्यु हुनेको संख्या ५०९ पुगेकाे छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमका अनुसार मृ’त्यु हुने सुनसरीका ३ पुरुष, काठमाडौँका २ पुरुष, भक्तपुरका १ पुरुष, ललितपुरका १ पुरुष, बाँकेकी १ महिला र रुपन्देहीका ३ पुरुष छन् । सं’क्रमित हुनेबाट भएको मृ’त्यु ० दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
को’रोना भा’इरस सं’क्रमणका कारण नेपालमा पहिलो पटक डाक्टरको मृ’त्यु भएको छ । कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कार्यरत बाँकेको खजुरा गाउँपालिका- ३ घर भएका ५९ वर्षका डाक्टरको को’रोना भा’इरस सं’क्रमणका कारण बिहीबार मृ’त्यु भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ ।
भदौ २९ गते सं’क्रमण पुष्टि भएका उनलाई श्वास फेर्न गाह्रो भएपछि नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा असोज १ गते भर्ना गरिएको थियो । प्लाज्मा थेरापी विधिका साथै रेमडेसिभरको समेत प्रयोग गरेर उनको उपचार गरिएको भएपनि बिहीबार एक्कासी स्वास्थ्यमा स’मस्या देखिएपछि बिहान ९ बजे उनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार थालिएको थियो ।
भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिरहेकै समयमा बिहीबार दिउँसो ३ः१० बजे उनको मृ’त्यु भएको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डा. रविन खड्काले जानकारी दिए । उनी कर्णाली प्रदेश अस्पतालका चिफ कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन समेत रहेको खड्काले बताए ।
पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा १९११ जनामा को’रोना भा’इरस सं’क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १२ हजार ४४४ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा १९११ जनामा सं’क्रमण पुष्टि भएको हो ।
नेपालमा हालसम्म को’रोना सं’क्रमितको संख्या ७९ हजार ७ सय २८ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकाका मात्र ९४३ जनामा को’रोना सं’क्रमण भएको छ । काठमाडौंका ८१७, भक्तपुरका ५८ र ललितपुरका ६८ जनामा सं‌’क्रमण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा को’रोना भा’इरस सं’क्रमण निको भएर ९६१ जना घर फर्केका छन् । नेपालमा हालसम्म ५७ हजार ३ सय ८९ जना को’रोना सं’क्रमण निको भएर घर फर्किएका छन् । हाल सक्रिय सं’क्रमितको संख्या २१ हजार ८ सय ३० रहेको छ ।
”संस्थागत सफलता एउटा व्यक्तिले हात पार्ने कुरा होइन”, ‘मैले काम मात्र गरेको हुँ’‘: कुलमान घिसिङ : कुलमान घिसिङ